Agba ahịhịa na-acha uhie uhie, akwa ahịhịa na-acha uhie uhie, polyester agba agba ahịhịa - YINGTESHENG
N'ime afọ iri atọ, "àgwà kachasị elu" ka a zụrụ azụ n'ọrụ ndị ọrụ.
YTS nwere ihe karịrị ndị ọrụ 300, gụnyere ndị ọkachamara ọkachamara, ndị injinia. Anyị nwere ikike ịzụlite akụkụ ọhụrụ na ngwaahịa iji nye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma.
Iji nwee ike ịsọ mpi, YTS nwetara Beijing Brush Factory na akara ya "Nnukwu Mgbidi" na 2016. N'ime nnweta a, YTS nwere ọganihu dị ịrịba ama ọzọ ọ bụghị naanị na usoro nrụpụta kamakwa n'ahịa ahịa ụlọ.
Mgbe afọ nke omume, GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2015 quality management system, GB / T 24001-2016 / ISO140001: 2015 gburugburu ebe obibi e guzobere na ọ gafere mba nabatara ụlọ ọrụ asambodo WCA na SQP.
Nye Ọrụ Ogo
YTS kwadebere ihe karịrị 100 set nke ọkara akpaka na akpaka ahịhịa Ndinam na ule akụrụngwa, nke nwere ike melite YTS mmepụta ikike n'ike n'ike.
ANY MAN rụpụta Onodi
YTS nwere ihe karịrị 150 ọrụ n'ichepụta ogbako na anyị niile ghọtara ọkara akpaka na n'ụzọ zuru ezu akpaka mmepụta akara arụmọrụ. Uzo nke ebe oru di omimi na ezi uche.
ABLỌ ỌRUR ANY.
A na-eji ụlọ nyocha anyị enyocha brushes na ịchọta ụzọ iji melite ya. Anyị na-eme ọtụtụ nyocha zuru oke tupu anyị ere brushes anyị na ahịa, ngwaahịa anyị ọhụụ mepụtara na laabu a.
Ebe ọ bụ na YTS amalitela n'ọmụmụ ihe ọmụmụ ezinụlọ na Baoding, Hebei na 1990, ọ nọ na-elele usoro nlekọta nke "Ogo karịa ihe niile". Na mbido, YTS bụ isi azụmaahịa bụ ire bristle esi, n'oge na-adịghị anya ọ ghọrọ naanị onye na-eweta ngwa ngwa Beijing Brush Factory.
Na 2005, iwebata teknụzụ na igwe nyere YTS ohere ịbawanye azụmaahịa ya iji tee ebe ncha. N’otu afọ ahụ, YTS guzobere isi ụlọ ọrụ ya — onye na-emepụta ihe na Qingyuan Industrial Park, mpaghara dịpụrụ adịpụ nke Baoding, Hebei. Ọ enyene karịrị 700,000 square ụkwụ, kpụrụ sie bristle Ndinam osisi, filament ịbịaru osisi, aka Ngalaba, ahịhịa na-eme ...
YTS Sịntetik filamenti 002
YTS Sịntetik filament 003
YTS Sịntetik filament 004
YTS Sịntetik filament 005
YTS Ewepụghị Kpaa Series 001
YTS Ewepụghị Kpaa Series 002
YTS Ewepụghị Kpaa Series 003
YTS Ewepụghị Kpaa Series 004